Miverina amin'ny Sizzle: Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra e-varotra mampiasa famoronana mba hampitomboana ny fiverenana | Martech Zone
Ny fanavaozana ny tsiambaratelon'ny Apple dia nanova tanteraka ny fomba anaovan'ny mpivarotra e-varotra ny asany. Tao anatin'ny volana maromaro taorian'ny namoahana ny fanavaozana, dia ampahany kely amin'ny mpampiasa iOS no nisafidy ny hanaraka ny doka.
Araka ny fanavaozam-baovao farany tamin'ny volana jona, manodidina ny 26% amin'ireo mpampiasa fampiharana manerantany no namela fampiharana hanara-maso azy ireo amin'ny fitaovana Apple. Ity tarehimarika ity dia ambany kokoa any Etazonia amin'ny 16% fotsiny.
Raha tsy misy ny fanekena mazava hanara-maso ny asan'ny mpampiasa manerana ny habaka nomerika, maro amin'ireo paikady fanentanana izay nianteheran'ny mpivarotra no tsy azo atao intsony. Ny mpivarotra e-varotra dia hanana fotoan-tsarotra manokana satria ny famoronana mavitrika nampiasain'izy ireo hampahatsiahivana ny mpampiasa ny vokatra nojereny na navelany tao anaty sarety dia nihena be.
Ny paikadin'ny fanaraha-maso ny doka efa andrana sy marina dia tsy hidina eny an-dalana tanteraka, fa hiova be izy ireo. Ny sandan'ny fifamoivoizana ahafahana mametra ny fanaraha-maso doka (Lat) dia mitombo ao amin'ny tontolo taorian'ny 14.5, ary ny vokatra nohatsaraina azony raha oharina amin'ny fifamoivoizana LAT dia manentana ny mpivarotra mba hanolotra avo kokoa noho ny taloha. Mba hanararaotra ireo fironana ireo sy ny hafa, ny mpivarotra e-varotra dia mila manova ifotony ny fomba fiasany amin'ny famoronana dokam-barotra. Ireto ny sasany amin'ireo fomba voalohany hijanonan'ny famoronana ho fitaovana manan-danja amin'ny fahombiazan'ny e-varotra, ary toro-hevitra ho an'ny mpivarotra mitady hampitombo ny fiverenany amin'ny fandaniana doka rehefa mihatra ireo fiovana ireo.
Ny tsy fahampian'ny angona mpampiasa dia mitaky famoronana miaraka amin'ny antso midadasika kokoa
Ny famoronana tsara tarehy sy tany am-boalohany dia hanampy ireo marika hanavaka ny tenany ao anatin'ny tsena feno olona, ​​na dia tsy mampiasa fitaovana lasibatra aza. Eo am-piezahana hanatratra tanjona bebe kokoa, matetika ny orinasa dia mampiasa doka manjavozavo sy mahazatra. Fa ny fanariana harato midadasika dia tsy voatery midika ho endrika manjavozavo. Raha tsy afaka miantehitra amin'ny fanatratrarana olona iray manokana ianao, dia tsy maintsy mahatohitra olona maro indray miaraka ny famoronanao. Ireo mpanao dokam-barotra izay mampiasa vola amin'ny famoronana tsy manam-paharoa dia hanana fotoana mora kokoa hisarika ny saina sy hahita mpanjifa vaovao amin'ny faritra midadasika indrindra amin'ny fiolahana lakolosy.
Manome fahafahana hampita ny toetran'ny marikao amin'izao tontolo izao ihany koa ny famoronana doka. Ho an'ny ankamaroan'ny marika, izany dia midika fa mampiaraka sary manintona amin'ny hafatra mahery vaika. Ny tsy fisian'ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa dia mahatonga azy ho zava-dehibe kokoa ho an'ny mpanao dokam-barotra amin'ny famoahana famoronana misy fiantraikany, amin'ny fampiasana feo marika mazava hanaterana traikefa ho an'ny mpanjifa tsy hay hadinoina. Ny mpanao dokam-barotra dia tokony hifantoka amin'ny hafatra izay mampifandray ny soatoavin'ny marika amin'ny fiainan'ny mpanjifa. Eritrereto fa na iza na iza mahita ny famoronana dokao dia niaina voalohany ny marikao; inona no tokony ho fantatry ny mpanjifa momba ny orinasanao? Ampifandanjao ny hafatra mazava sy matanjaka miaraka amin'ny teknika fitantarana manaitra mba hahazoana fahatsapana maharitra. Araka ny filazan'ny varotra taloha: aza mivarotra ny steak fa amidio ny sizzle.
Ampio ny ezaka organika hifandraisana amin'ny mpanjifa izay misy azy ireo
Manantena ny mpanjifa amin'izao fotoana izao fa afaka mifandray sy mifampiresaka amin'ny marika momba ny zava-dehibe amin'izy ireo. Ny famoronana mahomby dia ahafahan'ny marika manome traikefa amin'ny resaka amin'ny alàlan'ny paikady organika toy ny media sosialy. Ohatra, maro amin'ireo sehatra media sosialy no manome safidy ny mpampiasa hanolo-tena an-tsitrapo ny angona demografika sasany mba hanatsarana ny traikefany. Ny fifandraisana amin'ny mpanjifa izay efa ivorian'izy ireo dia tsy misy dikany, ary ny fahaiza-manaon'ny sehatra fototra efa voaomana dia manampy amin'ny fampidirana indray ny sasany amin'ireo demografika izay very tsy misy fanaraha-maso ny doka. Ny mpanjifa koa dia mahazo hery bebe kokoa noho ny hatramin'izay hifidy amin'ny kitapom-bolany, ka ny mpanao dokam-barotra dia tokony hampiditra ny famoronany — sy ny resaka aingam-panahy — miaraka amin'ny fomba fijery sy fahatsapana ny soatoavin'ny orinasa.
Soloy vokatra malaza ny tolo-kevitra mifandraika
Ny fepetra vaovao momba ny fiainana manokana an'ny Apple dia hampitsahatra ny fanamboarana tolo-kevitra manokana momba ny vokatra mifototra amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa taloha ho an'izay rehetra manakana ny fanaraha-maso. Ho solon'ny vokatra mitovitovy, ny mpanao dokambarotra dia tokony hifantoka amin'izay malaza. Ny famoronana doka izay manasongadina ny vokatra lafo indrindra dia mahatonga ny fampiasam-bola hendry satria mampiharihary na ho an'ny mpanjifa efa misy sy ho an'ny mpanjifa amin'ireo entana efa fantatrao manetsika ny fanjaitra ho an'ny orinasanao.
Ny toe-tsain'ny omby dia manome fahatokisana ny mpanjifa amin'ny marika vaovao ary mahatonga azy ireo hividy vokatra malaza amin'ny namany. Izany no mahatonga ny fanasongadinana ny mpivarotra tsara indrindra amin'ny famoronana dokao dia fomba tsara hampitomboana ny fahatokisana sy hitarihana ny mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny fantson'ny varotra, na dia tsy misy teboka angon-drakitra lalina momba ny maha-izy azy sy ny zavatra tiany.
Asongadino ny fanavahana fototra sy ny endri-javatra miavaka amin'ny vokatra
Ny marika dia afaka mandray ny tsy fisian'ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny mpanjifa ho toy ny fotoana hanasongadinana ireo fanavahana lehibe izay mampiavaka ny vokatra. Ny famakafakana ny angon-drakitra momba ny varotra dia hanampy ireo marika hamaritra izay mahatonga ny vokatra ho tsy hay hadinoina. Avy eo ianao dia afaka mamolavola famoronana izay mampiroborobo ireo singa ireo, toy ny vokatra mifanaraka amin'ny habeny, rojo famatsiana maharitra, na fampiasana akora azo ampiasaina.
Ny fihainoana ny mpanjifanao momba izay mifanaraka amin'izy ireo dia paikady mahasoa ihany koa; ny fanamarihan'ny mpanjifako sy ny fandraisan'anjaran'ny media sosialy ho an'ny fomba fijery miavaka momba ny zavatra tian'ny mpanjifa momba ny marikao ary mamolavola famoronana izay mankalaza ireo toetra ireo. Ary aza matahotra ny hiantehitra amin'ireo teboka fanavahana izay nanentana ny mpanjifa taloha mba ho tena mahatoky amin'ny marika, na inona na inona tsy ampoizina.
Ny famoronana dia ho tsy dia mifanaraka tanteraka ary tsy dia voafaritra loatra amin'ny tontolo post-14.5. Saingy indrindra rehefa mitombo ny tahan'ny fidirana amin'ny fanaraha-maso ny doka sy ny fananganana ho an'ny iOS 14.6 sy ny sisa, ny famoronana dia ho fitaovana manan-danja ho an'ny mpanao dokam-barotra mitady hifandray amin'ny mpanjifa vaovao sy ny fandrosoana amin'ny mpihaino tsy fantatra. Tahaka ny amin'ny fanavaozana teknolojia rehetra, ny evolisiona no lalana mandroso. Mba hahombiazan'ny mpanao dokam-barotra dia mila mampifanaraka sy mampivoatra ny fahatakarany momba ny famoronana sy ny fampiharana mahery vaika maro izy ireo.
Tags: apple privacykfamoronanaecommercempivarotra e-varotramarketing marketingiOSLAT fifamoivoizanamiverina amin'ny fandaniana dokamiverina amin'ny famoronana